Xml အကြောင်းမေးချင်လို့ပါ - MYSTERY ZILLION
Vote Up0Vote Down moelay November 2008 Posts: 2Registered Users xml ကိုဘယ်အတွက်အဓိကသုံးလဲသိချင်လို့ပါ...ပြီးတော့ xml မှာ dataset နဲ့ဘယ်လိုတွဲသုံးရမလဲလို့.....စာအုပ်တအုပ်ကိုဖတ်ပြီး vote ပေးချင်တယ်ဆိုရင် xml နဲ့ဘယ်လိုတွဲသုံးလည်းသိချင်လို့ပါ..ဖြေပေးကြပါနော်....	6 မှတ်ချက်များ sorted by Votes
Vote Up0Vote Down kotharthar November 2008 Posts: 615Registered Users XML ကိုအကြောင်းအရာ များစွာအတွက် သုံးနိုင်လို့ ဘယ်အတွက် အဓိကလဲ ပြောရခက်ပါတယ်။Data တွေကို Textual markup အနေနဲ့ Data Format မတူတဲ့ System တွေအကြား မျှေ၀နိုင်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်လိုသုံးကြတယ်ဆိုတာနားလည်နိုင်လောက်ပါတယ်။XML နဲ့ DataSet ကိုဘယ်လိုသုံးရသလဲ မေးပုံထောက်တော့ADO.Net နဲ့ ဆိုင်တဲ့ Project တစ်ခုခုလုပ်နေပုံရတယ်။DataSet object မှာ XML stream ကို generate လုပ်တဲ့ Method ပါပါတယ်။အတိအကျတော့မေ့သွားပါပြီ။ ရှာကြည့်ပါဦး။	Vote Up0Vote Down lynndragon November 2008 Posts: 25Registered Users xmlရဲ့အရှည်စာလုံးကဘာပါလဲ။xmlကိုဘယ်အချိန်ကစသုံးပါသလဲ???	Vote Up0Vote Down guengey November 2008 Posts: 327Registered Users [quote=lynndragon;20089]xmlရဲ့အရှည်စာလုံးကဘာပါလဲ။xmlကိုဘယ်အချိန်ကစသုံးပါသလဲ???Extensible Markup Language (XML) &#91;COLOR=#800080&#93;http&#58;//www.roseindia.net/xml/xml-history.shtml&#91;/COLOR&#93; ဒါက history of xml ပါ :)	Vote Up0Vote Down guengey November 2008 Posts: 327Registered Users xml is EXtensible Markup Language andakind of markup language as html.But different from html. XML was designed to carry ,transport and store data and html was designed to display data.XML is plain text .Software (such as notepad )that can handle PLain text can open XML .XML allows user to define his own tags and his own document structure cos it has no predefined tags.XML becameaW3C (world wild web consortium) Recommendation 10. February 1998.	Vote Up0Vote Down guengey November 2008 Posts: 327Registered Users xml နဲ့့ပတ်သတ် ပြီး အခြေခံ ကို လွယ်လွယ် လေ့လာနိုင်အောင် လို့ဒီမှာ ဒေါင်းပါpdf ebook လေးပါ။ ရိုးရိုး နဲ့ ရှင်းရှင်း ရေးထား တာလေးပါ ။:)	Vote Up0Vote Down istein November 2008 Posts: 1,121Registered Users Internet always join ထားတယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါ site လေးမှာ သွားရောက်လေ့လာစေချင်ပါတယ်။http&#58;//www.w3schools.com/	AddaComment ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်းစတင်ရန်
November 2008 istein
November 2008 kotharthar
November 2008 lynndragon
November 2008 Powered by Vanilla